Philips na -eme ka ọkụ Hue ya na -agba egwu na ụda Spotify | Akụkọ Ngwa
Miguel Hernandez | 01/09/2021 17:37 | General, Noticias
Na nso nso Philips emeela ihe omume na -atọ ụtọ nke ukwuu nke anyị nwere ike ịga na nke anyị weghaara ihe bụ akụkọ na -esote na ngwaike na ngwanrọ site na ngalaba Hue maka afọ 2021 fọdụrụnụ.
Oge a anyị kwụsịrị na mmekorita na -atọ ụtọ nke na, n'eziokwu, anyị amaghị etu mmadụ na -echebughị ya na mbụ. Spotify na Philips jikọrọ aka wee mekọrịta egwu gị na ọkụ ọkụ gị wee mepụta gburugburu ike. N'ezie, ụmụ nwoke nọ na Spotify akwụsịghị ịtụ anyị n'anya na ngwa dị iche iche nke ọrụ egwu egwu ha.
Ọ bụghị ihe niile anyị hụgoro bụ sọftụwia, na ọ bụ na ngalaba nke Hue ekwuputala igwe onyonyo ọhụrụ, yana obere mmezi nke ụfọdụ bọlbụ ya nke na -arụ ọrụ nke ọma ugbu a. Onye ọ bụla nwere ụlọ zuru oke nke nwere Philips Hue dịka ọ dị na m, ga -amara na ejighi ike ọkụ ha amachapụ bọlb ndị a.
Ugbu a, anyị nwere akụkọ egwu maka ndị ọrụ Philips Hue ndị na -anụ ụtọ ọkụ ọkụ nwere agba dị iche iche ma ọ bụ ngwaọrụ RGB dị iche iche. Ọ bụrụ na ị gaa na ngalaba ntụrụndụ nke ngwa Hue maka ngwaọrụ mkpanaka, ị ga -enwe ike ịmekọrịta sistemụ gị na Spotify. ọ ga -enyekwa gị ohere ijikọ egwu gị na ọkụ gị, ị ga -eme ka ọkụ gbaa egwu n'ụzọ nkịtị.
A tọhapụrụ atụmatụ a, ịkwesịrị imelite ngwa Philips Hue gị wee soro usoro ndị a kpọtụrụ aha n'elu. Were ohere a cheta na Philips Hue nwere metadata nke egwu a, yabụ na ngosipụta na tiori agaghị egbu oge ọ bụla na egwu. Ka ọ dị ugbu a, ị nwere ike ịga n'ihu ịkụ nzọ na ọkụ ọkụ. Cheta na na Ngwa Actualidad Anyị nwere ọtụtụ nkuzi na YouTube maka otu esi agbakọba akụrụngwa ọkụ ụlọ gị mara mma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » Philips na -eme ka ọkụ Hue ya na -agba egwu na ụda Spotify
Jabra na -emelite ụdị ngwaahịa ya na isi okwu Elite atọ